Cabista Shiishadda oo Laga Dhaxlo Cuduro Baddan | KEYDMEDIA ONLINE
Cabista Shiishadda oo Laga Dhaxlo Cuduro Baddan
Frankfurt (Keydmedia) - Waxa dhawaan cilmi baaris lagu sameeyay dad badan oo caba shiishada taasoo lagu ogaaday in cuduro badan laga qaado cabista shiishada.
Cilmi baaristaan lasameeyay ayaa waxa lagu soo qoray shabakada kafaaloota inta badan arimaha caafimaadka ee loo yaqaano (Life Science) iyadoona lagu xaqiijiyey in biyaha ku jira shiishada ama badeecada ee la jiido ay lamid yihiin wax yeelada sigaarku leeyahay, isla markaana ay biyahaasi wataan carbon monoxide, iyadoona tuubada qiica uu soo maro la sheegay in laga qaado cudurka Kansarka.
Cilmi baarayaal u kala dhashay Mareykanka iyo japan oo daraasadaan sameeyay isla markana ku xeel dheer dabagalka cudurka Kansarka, ayaa hoosta ka xariiqay in 45.3% dhalinyarada ay sadex meelood cabaan badeecada, iyaga oo tubaako iyo waxyaabo kale ku darsanaya halka 46.6% ay sigaarka ka
cabaan dadka da’da ah.
Ugu danbeeyan daraasadaan ayaa waxa kaloo lagu ogaaday in 25% dadka cabo shiishada ay u badan yihiin ardeyd, sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in tubooyinka shiishada lagu cabo oo aan landiifin ay wataan cudurada ay kamidka yihiin bacteria.iyo infection oo dhamaantood laga qaado shiishada.
Cabdi shakuur farax cigale (washiton) - Niarobi-Kenya